🥇 ▷ Faham sida Huawei u gaadhay 7680 fps on Mate 30 Pro ✅
Faham sida Huawei u gaadhay 7680 fps on Mate 30 Pro
Mid ka mid ah astaamaha ugu soo jiidashada badan ee Mate 30 Pro waa mooshinkiisa gaabiska ah ee cajiibka ah. Qaabkan wuxuu qabsan karaa 7680 meegaar halkii seb, aad ayuu uga sarreeyaa xaalad kasta oo tartiib tartiib ah taleefannada kale ee wata Galaxy Note 10+
Si kastaba ha noqotee, su’aasha ayaa kacsan: sidee Huawei ku gaadhay caynkaas oo kale? Mid ka mid ah howl wadeennada shirkada sumadda leh, Bruce Lee, wuxuu sharaxay sida ay ugu suurta gasho in lagu gaaro xawaaraha noocaas ah taleefonka kamaradda ‘fudud’. Marka hore, waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya 960 fps iyo 7680 fps.
Xaqiiqdii, farqiga u dhexeeya awooda toogashada waa la arki karaa. Fiidiyowga markii nalka la shiday 960 fps ka dibna 7680 waxay u eg tahay ‘dhaqaaq dhaqaaq tartiib tartiib ah’. Tani waxay matalaysaa suurtagalnimada ugu badan ee aan dhammaad lahayn markay tahay duubista walxaha dhaqaaqa. Sida ugu dhaqsaha badan ficilka xiisaha badan wuxuu noqon doonaa. saamaynta ugu dambeysa.
Huawei wuxuu adeegsaday sirdoon macmal ah si uu nolosha ugu keeno mooshin aad u gaabis ah
Bruce Lee wuxuu sharraxayaa in asal ahaan, taleefanka gacantu uu diiwaangelinayo qiyaastii 0.12 sekanno ee 7680 fps. Sirdoonka farshaxanka ayaa markaa loo isticmaalaa in lagu xusho xayndaabyo loona sameeyo wax kasta oo horumar ah sidaa darteed fiidiyowga ugu dambeeya wuxuu ku jiraa xaalad wanaagsan. Nidaamkani wuxuu isticmaalaa 2 GB oo RAM ah markasta oo tartiib tartiib loo isticmaalo, ayuu yidhi Lee.
Runtu waxay tahay in Huawei ay sameysay dadaal aad u weyn si ay u keento mooshinkan gaabiska ah nolosha. Tijaabooyinkooda deegaanka ee la xakameeyay waxay muujinayaan tusaalooyin kala duwan oo kubbad boodbooniyo ah, kubado la tuurayo iyo noocyo kala duwan oo walxaha ka sameysan si loogu tijaabiyo saamaynta ugu wanaagsan ee suurogalka ah.
Tafatirka 4gnews waxay kugula talinayaan: